CMS (Content Management System) ဆိုတာဘာလဲ? | Myanmar Web Store
CMS (Content Management System) ဆိုတာဘာလဲ?
CMS (content Management System) ဆိုတာ ကျွမ်းကျင်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များသာမက သာမန်သုံးစွဲသူမျးကိုယ်တိုင် မိမိတို့၏ website ကို ပြင်ဆင်ခြင်း.၊ စာသားများပြောင်းခြင်း.၊ ရုပ်ပုံများထည့်သွင်းခြင်း စသည်သဖြင့် အစရှိသည်တို့ကို ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်လို့ရသည့် နည်းစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
A content management system isaweb application designed to make it easy for non-technical users to add, edit and manageawebsite.
ကျွန်တော်/ ကျွန်မတို့ Myanmar Web store မှ CMS(Content Management System) website များကိုလည်း ထပ်တိုးဝန်ဆောင်မှု ပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။
Myanmar Web Store မှ မိတ်ဆွေတို့ လုပ်ငန်းများ ပိုမိုတိုးတက် ကြီးပွားစေရန်အတွက် website ပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပက်သက်သော ကိစ္စအဝဝအား အကောင်းမွန်ဆုံး ၀န်ဆောင်မှု ၊ အချိုသာဆုံးနှုန်းထားများဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ တာဝန်ယူပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အသေးစိတ်အား Myanmar Web Store တွင် အခမဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါသည်။
+9592017178 +65 85006525
Related Articles- E-commerce ဆိုတာဘာလဲ?